The Abyss (1989) – MM Subtitles
Video Sources 4155 Views Report Error
There's everything you've ever known about adventure, and then there's The Abyss.Aug. 09, 1989USA139 Min.PG-13
“The Abyss”ဇာတ်ကားကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးတော့ IMDb 7.6 အထိရရှိထားတဲ့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ၁၉၉၀မှာ အကောင်းဆုံးအထူးပြုလုပ်ချက် အော်စကာဆုကိုပါ ရရှိထားတဲ့ကားဖြစ်တာကြောင့် လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရှူသင့်တဲ့ကားလေးလဲဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာ ကာရေဘီယန်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာ အမည်မသိတဲ့အရာတစ်ခုကိုတိုက်မိပြီး ရုတ်တရက်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ကာ နစ်မြုပ်သွားပါတယ်။
အဲဒီ့သင်္ဘောကိုရှာဖွေဆယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် အမေရိကန်အစိုးရဟာ SEALအဖွဲ့နဲ့အတူ ရေငုပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ရေအောက်ရေနံလုပ်သားတစ်ဖွဲ့ကို အတူပူးတွဲတာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရေနံလုပ်သားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ “ဘရစ်မန်း”ဟာ သူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပယ်မဟုတ်လို့ သူ့လူတွေလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ပြီး ငြင်းဆန်ခဲ့ပေမယ့် လစာငွေသုံးဆပေးမယ်ဆိုတဲ့မက်လုံးကြောင့် အဖွဲ့သားတွေရဲ့လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုတော့ မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီစစ်ဆင်ရေးမှာတော့ ထိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင် ပလက်ဖောင်းတည်ဆောက်ပုံအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့ ဘရစ်မန်းရဲ့ ဇနီးဟောင်း “လင်ဆီး”လဲပါဝင်လာပါတယ်။
ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ နာရီပိုင်းအတွင်း ဆူနာမီတိုက်နိုင်ခြေရှိနေတဲ့အပြင် အမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတင်းမာမှုတွေကြောင့် ပင်လယ်ပြင်ဟာ အလွန်ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ကြား ကျရောက်လျက်ရှိပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်ရေငုပ်သမားတွေအတွက်တောင် အလွန်တစ်ရာနက်ရှိုင်းပြီး အန္တရာယ်များလှတဲ့ ရေအောက်အထိ ရေငုပ်နိုင်ဖို့က တကယ်မလွယ်ကူလှတာကို သာမန်ရေနံလုပ်သားတွေဖြစ်တဲ့ ဘရစ်မန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားမှာ စစ်ဆင်ရေးကိုအောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါ့မလား….
အမေရိကန်ရေငုပ်သင်္ဘောနစ်မြုပ်သွားရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကိုရောရှာတွေ့နိုင်မလား…. သူတို့တွေရောအဲဒီ့အမည်မသိတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ရင် လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား….ဆိုတာကို ဒီကားလေးထဲမှာ ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြရအောင်ပါ။
Duration……..: 2h 51min
IMDb Rating 7.6 159,290 votes
TMDb Rating 7.3 1,706 votes
Download 480p G Drive 618 MB
Download 480p Yandex 618 MB
Download 720p G Drive 1.09 GB
Download 720p Yandex 1.09 GB
Watch online 480p Yandex 618 MB
Watch online 720p Yandex 1.09 GB